Le mveliso sisixhobo sokuthambisa esisandula ukuveliswa, isiqholo, njl. Yinkampani yethu ukucacisa nokucoca ulwelo emva kokukhenkcisa; sisixhobo esifanelekileyo kumzi-mveliso wokuthambisa ukucoca i-lotion kunye nesiqholo. Isixhobo sale mveliso senziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu engama-304 okanye nge-316L intsimbi engenasici, kwaye impompo yedaphragm yomoya engeniswe e-United States isetyenziswa njengomthombo woxinzelelo wokucoca uxinzelelo. Umbhobho wokudibanisa wamkela ucoceko olucocekileyo ...
Tube ukufudumeza ngaphakathi ukugcwalisa kunye nokutywina umatshini usebenzisa umbhobho odityanisiweyo kunye nethumbu leplastiki njengesikhongozeli, ngokufudumeza umoya oshushu kunye nokutywina. Yonke inkqubo ilawulwa yi-PLC kwaye iboniswa kukuchukumisa isikrini.
Ukubeka indawo kwicala leThubhu, ulawulo lweemoto servo yemoto;
16station rotary oluzenzekelayo, ukuzalisa ngokukhawuleza, imilinganiselo echanekileyo;
Isantya esiphezulu sokugcwalisa umlawuli wevolumu, kulula ukulungelelanisa umlinganiso;
Ukungenisa umoya oshushu ngaphakathi kwesixhobo sokufudumeza, ukuvalela umsila ngobuhle kunye nokuqina;
Ukuzikhethela ngokwemiba eyahlukeneyo: inkqubo yokufudumeza i-hooper, iintloko zokuzalisa anti-zoba.
Uluhlu lwezixhobo kunye neNtelekelelo yeendleko Inani Igama Ubungakanani beCandelo leYunithi Umsebenzi Amaxabiso apheleleyo 1 Ibhotile enokusetyenzwa ngesandla 1 Faka ngesandla ibhotile kwibhotile engenanto $ 4,055.00 $ 4,055.00 Umgcini webhotile ungene ngaphakathi kwaye ushiye 2 GF16 / 5 Rotary Piston Filling and Capping Machine 1 16-head umatshini wokugcwalisa ipiston; Umsebenzi wokwenza intloko ezintlanu. $ 54,765.00 $ 54,765.00 Uhlobo lwesilinda oluxhomekeke, i-cam drive, i-silinda yamazwe aphesheya ehamba phambili edibeneyo ...
Le mveliso ngumatshini wokuzalisa okunjongo-mbini wokuncamathisela kunye nolwelo, eyilelwe ukusetyenziswa kwiiyunithi zokulwa uqhushululu Umatshini usebenza ekugcwaliseni ubuninzi bamanzi, ioyile, i-emulsion kunye nezinto ezifana nokuncamathisela. Itafile yomsebenzi inokuphakanyiswa ngokwemfuno yokugcwalisa. Indlela yokondla: umxhuzulane oqhelekileyo / uhlobo lokutsala oluzenzekelayo Ulawulo: ulawulo lwombane / ulawulo lwepneumatic Ukuzalisa ivolumu: 5-1000ml, eyahlulwe yangamacandelo ama-6 A, B, C, D, E, F. 1. Iimpawu zesakhiwo: Le mveliso isebenzisa iplagi-ngaphakathi ...
1. Uncrambler ngokuzenzekelayo intshayelelo: Ngokuzenzekelayo iscrambler esizenzekelayo singenza ukuba ibhotile efumaneke ngokulandelelana, kwaye ingayithumela ibhotile iye kwi-conveyor nganye nganye, emva koko isixhobo esiguqula ibhotile sijike ibhotile siye kwicala elinye kwaye sizise kwindawo yokuzalisa. Iiparameter zobuchwephesha eziphambili: Isivuno somthamo: Iibhotile ezingama-60-120 / ukusetyenziswa kwesicelo: Ibhotile yeplastiki ejikeleze i-10ml-100ml Amandla: 340w umoya oxineneyo: 3-5kg / m³ Dimension (mm): 960 * 960 * 1140 Ubunzima: 450kg 2. Uhlobo lwesilinda lwe-ultrasonic Washi ...
Ukugcwalisa iziqholo kunye nokufaka umgca wemodeli engu-4 yemilomo yobude bebhotile I-H） 660 * 470 * 1330mm iqondo lobushushu elingu-0-30 speed Isantya sokumpompa 5.5L / s Isixhobo somoya sokuqhumisa umatshini Lo matshini usebenzisa ulawulo olupheleleyo lwe-pneumatic, olulungele ngokukodwa ...
Uqeqesho: I-Innovate's Liquid Detergent Agitator Series yenziwe ngebhodwe eliphambili, inkqubo evuselelayo, inkqubo yokufudumeza, inkqubo ye-vacuum, inkqubo yolawulo kunye neqonga lokubeka izinto, njl. Inkqubo yokuxuba ixhotyiswe nge-unidirectional okanye nge-bidirectional udonga olususa udonga kunye nolawulo lwamaxesha. Eyona mbiza iphambili inokufudunyezwa ipholile njengoko kufuneka. Lo matshini kufanelekile kumashishini afana nolwelo ...